Gịnị bụ Social CPX, Webtalkmmemme mmekorita nke nnukwu ego? - 💌 WebTK - Ogosi gị ka WebTalK 🚀 Kpọọ, Nyochaa, Akụkọ & ọzọ 🔥
Gịnị bụ Social CPX, Webtalkmmemme mmekorita nke nnukwu ego?
Webtalk choro inyere onye obula aka ijikota ohere ndi ozo ma mee ka o nwekwuo ihe iga nke oma Webtalk weputara 50% nke ego niile site na ntinye akwukwo ntinye aka Social CPX.
Webtalkndị kasị nwee netwọk n'Ịntanet na ndị na-azụ ahịa e-ahia na-emepụta iri puku ijeri dollar kwa afọ site na mgbasa ozi, mmezi nkwalite na ụgwọ azụmahịa.
Facebook na LinkedIn na nkezi na-emepụta $ 3 kwa ọnwa site na onye ọrụ ọ bụla. Amazon na-ewe ihe dị ka $ 70 kwa onye ọrụ kwa ọnwa site na ngwaahịa ahịa.
Dị ka obodo mbụ e-commerce n'etiti mmadụ, Webtalk oru ngo ruru ihe ruru $ 10 ma ọ bụ karịa kwa ọnwa site na onye ọrụ ọ bụla.
Webtalk na - enweta ego site na mgbasa ozi ahịa, nkwalite atụmatụ kachasị, atụmatụ talent na ụgwọ azụmahịa dịka ndị ọzọ mana ihe dị iche bụ: anyị na eso gị kerịta ya.
Webtalk's premium subscription upgrades includes premium call-in and live-chat support, izute mmezi nzukọ nzukọ na Webtalk Ihe ndebanye aha na-enweghị ihe ọ bụla, ihe niile na-amalite dị ka $ 15 kwa ọnwa.
The Webtalk Ndebanye aha Pro gụnyere ikike nke ozi na-enweghị njikọ, hụ ndị na-ele profaịlụ gị, chọta ndị dị maka ụgwọ ọrụ, ọchụchọ site na okike na afọ, na ọbụna ohere nchekwa maka faịlụ onwe.
Ulo ahia nwere ike iji Webtalk iji na-agba ọsọ nkwado mgbasa ozi na-aga n'ihu na ntanetị ọrụ, zụta oghere mgbasa ma ọ bụ ojiji Webtalkndị ọrụ ntinye aka na-enyere gị aka ịmepụta òtù gị.
Mgbe ị debanyere aha na mmemme mmekọrịta free ahụ, ị ​​ga-enweta ọrụ 10% na ego niile ndị ọrụ na ụlọ ọrụ ị na-ezo aka Webtalk maka ndụ.
Ogologo oge ị ga-enwe ike ịnweta ihe nkedo onye ọrụ na-eme atụmatụ na $ 1 kwa ọnwa.
Anyị niile maara na $ 1 adịghị agbanwe ndụ otú ahụ Webtalk kpebiri ime ihe a na-apụghị ichetụ n'echiche na inye onye ọ bụla ụgwọ maka ịmalite mmeghachi omume olu nke referrals.
na Webtalk ị na-enweta akwụmụgwọ maka ndị na-ede aha gị kpọmkwem ma ha na-ede aha ha na ndị na-ede aha gị na ya site na ọkwa ise nke nkewa.
Ka anyị kwuo na kwa ọnwa kwa ụbọchị na Ntuziaka na-eru na $ 1 na gị na ndị niile na-ede aha gị zoro aka na ndị ọrụ iri ọ bụla nakwa na ọ na-aga n'ihu na ọkwa ise ma ọ bụ ọkwa nke nkewa.
Ị nwere ike nweta $ 10 kwa ọnwa site na ọkwa mbụ gị, $ 100 site na nke abụọ gị, $ 1000 site na nke atọ gị, $ 10,000 site na nke anọ na $ 100,000 kwa ọnwa site na ọkwa nke ise gị.
na WebtalkNmekọrịta ndị mmekọ na - adị mfe "soro m Webtalk"Post na Facebook ma ọ bụ Twitter nwere ike ịdị na-agbanwe ndụ.
Akụkụ kachasị mma banyere usoro mmemme ahụ bụ na ị gaghị agbanwe ihe ọ bụla ị na-eme kwa ụbọchị.
Ngwunye netwọk ọ bụla na-enye gị profaịlụ ma ọ bụ njikọ njikọ maka gị ịkekọrịta ma wuo netwọk gị.
Webtalk eme otu ihe ahụ ka mma.
Mgbe njikọ profaịlụ gị na-adọta ndị ọrụ ọhụrụ Webtalk usoro nkwekọrịta anyị na patent-waiting na-enye gị akwụmụgwọ maka Ntuziaka.
Bubata email gị ma ọ bụ akwụkwọ adreesị ekwentị iji kpọọ ndị kọntaktị gị iji jikọọ na gị Webtalk ị ga-enweta otuto maka onye ọ bụla na-esonye.
Kekọrịta ndị na - abụghị ndị otu kerịta foto gị, vidiyo na faịlụ, ị na - enweta otuto maka Ntuziaka mgbe ha debanye aha ile ha anya.
Ọ bụrụ na ị nwere ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ blog, Webtalk enye gị na bọtịnụ mmekọrịta na mgbasa ozi ọkọlọtọ iji gosipụta na ndị ọbịa gị ma ọ bụrụ na ngwá ọrụ ndị a na-arụ ọrụ ndị ọrụ ọhụrụ ị na-akwụ ụgwọ maka akwụmụgwọ ndị ahụ na-akpọ.
Social CPX is Webtalkusoro ihe ntinye ederede nke na-enye gị ohere nke ị na-eji agagharị agagharị na nke ọ bụla n'ime ihe omume gị.
Ị nwere ike ịlele ọtụtụ akwụkwọ ịkpọ òkù ị zigara, mmadụ ole na ole sonyeere Webtalk ekele gị, ego ha nwetara na ọrụ gị.
Webtalk Ntọala mmemme ndị ọzọ nwere onwe ha ma bụrụ mgbe niile.
Ndị mmadụ na ndị ahịa ndị iso Webtalk na mbido ma nyere aka na-eto eto ga-enwe ohere kachasị ego.
Taa, e nwere ndị ọrụ netwọk 2 na-elekọta mmadụ gburugburu ụwa na ọnụ ọgụgụ ahụ ga-agbanye okpukpu abụọ n'afọ ise ọzọ.
Ka ndị mmadụ na-akpọ gị Webtalk ugbu a, ohere ị ga-enwe bụ maka ihe ịga nke ọma na-agbanwe ndụ.
I nweghị ihe ị ida, na ihe nile iji nweta.
Jikọọ ugbu a ma kpọọ onye ọ bụla ị maara tupu ha akpọ gị.
Webtalk: ụzọ kachasị mma iji kwurịta okwu na ịmepụta ihe ịga nke ọma.
Na-eleba anya na Social CPX by Webtalkonye nchoputa
Emelitere ikpeazụ April 2, 2019
Categories Banyere Webtalk Tags Mgbakwunye ahịa, Ụdị azụmahịa, Digital ahịa, Facebook, LinkedIn, Marketing, Sistemụ arụmọrụ, Ntughari ozi, elekọta mmadụ media, Ọrụ netwọk mmekọrịta, ule, Ngwa Windows Platform Windows, World Wide Web Hapụ ikwu Mail igodo
Ụlọ ọrụ redio maka Webtalk
Home - Banyere Webtalk - Gịnị bụ Social CPX, Webtalkmmemme mmekorita nke nnukwu ego?